၃၂ ပှဲ ရှုံးပှဲမရှိ မှတျတမျးနဲ့ ဆီမီးတကျသှားတဲ့ အာဇူရီ- အီတလီ ၂-၁ ဘယျလျဂြီယမျ ပှဲအပွီး မှတျမှတျရရပွောစရာ ၇ခကျြ – Sports A2Z
၃၂ ပှဲ ရှုံးပှဲမရှိ မှတျတမျးနဲ့ ဆီမီးတကျသှားတဲ့ အာဇူရီ- အီတလီ ၂-၁ ဘယျလျဂြီယမျ ပှဲအပွီး မှတျမှတျရရပွောစရာ ၇ခကျြ
ပြောကျဆုံးခဲ့ပွနျတဲ့ ဒီဘရိုငျးနားတို့ ရှရေောငျမြိုးဆကျ
နိုငျငံတကာအဆငျ့မှာတော့ ဘယျလျဂြီယမျအသငျးက တဝဲဝဲလညျနဲ့ လိုရာမရောကျတဲ့ အသငျးအဖွဈ ပနျးတိုငျမဝငျနိုငျဘဲ ပြောကျဆုံးခဲ့တဲ့ ရှရေောငျမြိုးဆကျအဖွဈသာ ဆကျလကျအဖတျတငျခဲ့ပါတယျ။ ဘရာဇီးလျ၊ ဂြာမနီ၊ အီတလီ၊ ပွငျသဈ၊ စပိနျတို့ရဲ့ အစဥျအလာအတိုငျး အကောငျးဆုံး မြိုးဆကျသဈကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပမေယျ့ နိုငျငံတကာဥရောပအဆငျ့မှာတော့ ဗိုလျဝငျခံဖို့ ပါရမီအထူးဆုံး လူစာရငျးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဘယျလျဂြီယမျတို့ ကဆြုံးနဆေဲ အခွအေနဖွေဈပွီး အသကျ ၃၀ တနျးဝငျလာတဲ့ ဒီမြိုးဆကျအတှကျ လာမယျ့ကမ်ဘာ့ဖလပွိုငျပှဲကသာ ထပျမြှျောလငျ့စရာအနနေဲ့ ပေါကျကှဲပွရဦးမှာပါ။
စပီနကျဇိုလာမပါဘဲ တိုကျပှဲဝငျရတော့မယျ့ အာဇူရီ.
နညျးပွမနျခြီနီရဲ့ အီတလီအသငျးကတော့ ပှဲမပွီးခငျ ၁၀ မိနဈအလိုမှာ ပွိုငျပှဲတလြှောကျ ခွစှေမျးတောကျပလာခဲ့တဲ့ ရိုးမားကှငျးလယျလူ စပီနကျဇိုလာကို ဒဏျရာကွောငျ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပွီး အသကျ ၂၈ နှဈသားဟာ အာဇူရီတို့ကို ဆီမီးဖိုငျနယျအထိ ဆှဲတငျခဲ့ပုံက ခြီးကြုးလောကျစရာ စှမျးဆောငျရညျအဖွဈ အသိအမှတျပွုရမှာပါ။ ပှဲကို ဆကျမကစားနိုငျတော့လို့ သူက အရနျခုံတနျးကို အခကျြပွပွီး လူစားလဲဖို့ အကူအညီတောငျးခဲ့ရတာကလညျး မနျခြီနီ ကြျောဖွတျရဦးမယျ့ စိနျချေါမှုအသဈဖွဈလာဖှယျရှိနပွေီး အီတလီတို့ ခေါငျးကိုကျရဦးမယျလို့ သုံးသပျခံထားရပါတယျ။
မနျခြီနီနဲ့ ပနျးဝငျနိုငျမလား အီတလီ
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားဝငျခှငျ့မှာ ခွစေဈပှဲမအောငျမွငျခဲ့တဲ့ အီတလီက ၃ နှဈအတှငျးမှာ အခြိနျယူပွငျဆငျခဲ့ပွီး ဒါဟာ နညျးပွမနျခြီနီရဲ့ စှမျးလှနျးတဲ့ တညျဆောကျစညျးရုံးနိုငျမှုဖွဈသလို လကျရှိ အီတလီရဲ့ ယူရိုဆီမီးရောကျ ခွစှေမျးမှာ သူ့ကို မဖွဈမနေ Credit ပေးရမှာပါ။ မနျခြီနီအလုပျလုပျခဲ့ပုံက ပွိုကှဲနတေဲ့ မွို့ပကျြတခုကို ပွနျစုစညျးခဲ့သလို အီတလီကို နဂိုအဆငျ့အတနျးပွနျရောကျအောငျ ဆှဲတငျခံ့တာဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့ဖလား ၄ ကွိမျ ကိုငျမွှောကျထားတဲ့အသငျးဟာ ၂၇ ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိမှတျတမျးနဲ့ ယူရိုဆီမီးကို ရောကျလာတာဟာ စပိနျအသငျးအတှကျတော့ အိပျမကျဆိုးမကျခွငျးမြိုးဖွဈခဲ့တာပါ။
ခံစဈအမှားကို ဘယျလျဂြီယမျ ဘာကွောငျ့မပွုပွငျခဲ့သလဲ
ဒီပှဲက ဘယျလျဂြီယမျရဲ့ ခံစဈပိုငျးအမှားတှကွေောငျ့ ပေးဆပျခဲ့ရတာဖွဈပွီး တိုကျပှဲတခုဝငျဖို့ ရှေ့၊လယျ၊နောကျ ညီညှတျခွငျးမှာ မမြှတနိုငျခဲ့ဘဲ အီတလီနဲ့အတှမှေ့ာ အတျောလေးရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။ နညျးပွရျောဘတျတို မာတီနကျဇျရဲ့ ပှဲကွိုအစီအမံတှကေ အလုပျဖွဈရဲ့လားဆိုတာတော့ မေးခှနျးထုတျစရာ ရှိခဲ့ပွီး ပျေါတူဂီနဲ့ပှဲကလို ကံကောငျးမှုတှကေို မယူဆောငျလာနိုငျတော့တာလညျး ခနျြပီယံဖွဈဖို့ ရညျမှနျးတဲ့ အသငျးတိုငျးအတှကျ မှတျသားရမယျ့ အခကျြတခကျြဖွဈခဲ့တာပါ။ လူအိုတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ခံစဈကွောငျးက ဘယျလျဂြီယမျကို ဒုက်ခပေးသှားခဲ့တယျလို့သာ ဆိုရမှာပါ။
လိုရနျဇို အငျဆဈဂျညေးရဲ့ လှပတဲ့တေးသှား
အီတလီရဲ့ ဒုတိယဦး​ဆောငျဂိုးကို ပထမပိုငျးမှာတငျ သှငျးယူပွီး ဘယျလျဂြီယမျကို ပှဲသိမျးပေးခဲ့တဲ့ အငျဆဈဂျညေးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက အသငျးအတှကျ အဆငျ့အတနျးမွငျ့ခွစှေမျးမြိုးကိုလညျး ပွသခဲ့သလို နာပိုလီအသငျးခေါငျးဆောငျဟာ သိပျမကွီးမားလှနျးတဲ့ သူ့ပုံရိပျနဲ့ လှမျးမိုးမှုကို ဖယျရှားနိုငျခဲ့ပွီး တညျငွိမျစှာနဲ့ အီတလီကို ထမျးတငျသှားခဲ့တာပါ။ အသကျ ၃၀ နှဈသားဟာ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ သူ့နာမညျတလုံးကို ရေးထိုးနိုငျခဲ့ပွီလို့ ဆိုရမှာပါ။
လီယိုနာဒို စပီနကျဇိုလာရဲ့ ကွကှေဲခနျး ဘယျလောကျထိကွာမလဲ
ရိုးမားကစားသမားဟာ ခွဖေနောငျ့ကွောကို ကွှကျသားပိုငျးဒဏျရာအဖွဈ အကွီးအကယျြထိခိုကျမိသှားခဲ့တာဖွဈပွီး အခြိနျအတျောကွာ အနားယူရတော့မယျလို့ သတငျးတှေ​က တကျလာနပေါတယျ။ ကစားသမားအတှကျရော အီတလီအတှကျပါ ဝမျးနညျးဖှယျရာ သတငျးတခုဖွဈခဲ့ပွီး မကျြရညျတှကေလြို့ ငိုကွှေးရတဲ့အထိ နာကငျြခံစားရတဲ့အတိုငျး ကှငျးထဲက ထှကျခှာသှားခဲ့ရတဲ့ အီတလီသားဟာ ၁ နှဈအထိ အနားယူရမယျလို့ သတျမှတျခံထားရပါတယျ။
ရျောနယျလျဒိုကို လိုကျမမီတော့တဲ့ လူကာကူ
ဘယျလျဂြီယမျတိုကျစဈမှူး လူကာကူက ယူရို ၂၀၂၀ ရဲ့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ပျေါတူဂီတိုကျစဈမှူးကွီး ရျောနယျလျဒိုကို အမီလိုကျဖို့ အားကောငျးမောငျးသနျကွိုးပမျးခဲ့ပမေယျ့ ခှာလိပျခဲ့ရပွီး ၄ ဂိုးနဲ့သာ ရပျတနျ့ခဲ့ရပွီး ပွိုငျပှဲရဲ့ ရှဖေိနပျဆုကို ရယူသှားဖို့ တဈပွေးနတေဲ့ အသကျ ၃၆ နှဈသားရဲ့ ၅ ဂိုးမှတျတမျးကို မကြျောဖွတျနိုငျတော့တာကလညျး သူ့ကို ရျောနယျလျဒိုနဲ့ တတနျးတညျးသတျမှတျပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့တဲ့ မာနျမာနကိုလညျး ထိခိုကျသှားစခေဲ့တယျလို့ ဆိုရမှာပါ။
ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြန်တဲ့ ဒီဘရိုင်းနားတို့ ရွှေရောင်မျိုးဆက်
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာတော့ ဘယ်လ်ဂျီယမ်အသင်းက တဝဲဝဲလည်နဲ့ လိုရာမရောက်တဲ့ အသင်းအဖြစ် ပန်းတိုင်မဝင်နိုင်ဘဲ ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ ရွှေရောင်မျိုးဆက်အဖြစ်သာ ဆက်လက်အဖတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ စပိန်တို့ရဲ့ အစဉ်အလာအတိုင်း အကောင်းဆုံး မျိုးဆက်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံတကာဥရောပအဆင့်မှာတော့ ဗိုလ်ဝင်ခံဖို့ ပါရမီအထူးဆုံး လူစာရင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယမ်တို့ ကျဆုံးနေဆဲ အခြေအနေဖြစ်ပြီး အသက် ၃၀ တန်းဝင်လာတဲ့ ဒီမျိုးဆက်အတွက် လာမယ့်ကမ္ဘာ့ဖလပြိုင်ပွဲကသာ ထပ်မျှော်လင့်စရာအနေနဲ့ ပေါက်ကွဲပြရဦးမှာပါ။
စပီနက်ဇိုလာမပါဘဲ တိုက်ပွဲဝင်ရတော့မယ့် အာဇူရီ.
နည်းပြမန်ချီနီရဲ့ အီတလီအသင်းကတော့ ပွဲမပြီးခင် ၁၀ မိနစ်အလိုမှာ ပြိုင်ပွဲတလျှောက် ခြေစွမ်းတောက်ပလာခဲ့တဲ့ ရိုးမားကွင်းလယ်လူ စပီနက်ဇိုလာကို ဒဏ်ရာကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အသက် ၂၈ နှစ်သားဟာ အာဇူရီတို့ကို ဆီမီးဖိုင်နယ်အထိ ဆွဲတင်ခဲ့ပုံက ချီးကျုးလောက်စရာ စွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရမှာပါ။ ပွဲကို ဆက်မကစားနိုင်တော့လို့ သူက အရန်ခုံတန်းကို အချက်ပြပြီး လူစားလဲဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့ရတာကလည်း မန်ချီနီ ကျော်ဖြတ်ရဦးမယ့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိနေပြီး အီတလီတို့ ခေါင်းကိုက်ရဦးမယ်လို့ သုံးသပ်ခံထားရပါတယ်။
မန်ချီနီနဲ့ ပန်းဝင်နိုင်မလား အီတလီ
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ခွင့်မှာ ခြေစစ်ပွဲမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အီတလီက ၃ နှစ်အတွင်းမှာ အချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ နည်းပြမန်ချီနီရဲ့ စွမ်းလွန်းတဲ့ တည်ဆောက်စည်းရုံးနိုင်မှုဖြစ်သလို လက်ရှိ အီတလီရဲ့ ယူရိုဆီမီးရောက် ခြေစွမ်းမှာ သူ့ကို မဖြစ်မနေ Credit ပေးရမှာပါ။ မန်ချီနီအလုပ်လုပ်ခဲ့ပုံက ပြိုကွဲနေတဲ့ မြို့ပျက်တခုကို ပြန်စုစည်းခဲ့သလို အီတလီကို နဂိုအဆင့်အတန်းပြန်ရောက်အောင် ဆွဲတင်ခံ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလား ၄ ကြိမ် ကိုင်မြှောက်ထားတဲ့အသင်းဟာ ၂၇ ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိမှတ်တမ်းနဲ့ ယူရိုဆီမီးကို ရောက်လာတာဟာ စပိန်အသင်းအတွက်တော့ အိပ်မက်ဆိုးမက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ခံစစ်အမှားကို ဘယ်လ်ဂျီယမ် ဘာကြောင့်မပြုပြင်ခဲ့သလဲ
ဒီပွဲက ဘယ်လ်ဂျီယမ်ရဲ့ ခံစစ်ပိုင်းအမှားတွေကြောင့် ပေးဆပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲတခုဝင်ဖို့ ရှေ့၊လယ်၊နောက် ညီညွတ်ခြင်းမှာ မမျှတနိုင်ခဲ့ဘဲ အီတလီနဲ့အတွေ့မှာ အတော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ နည်းပြရော်ဘတ်တို မာတီနက်ဇ်ရဲ့ ပွဲကြိုအစီအမံတွေက အလုပ်ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲကလို ကံကောင်းမှုတွေကို မယူဆောင်လာနိုင်တော့တာလည်း ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းတဲ့ အသင်းတိုင်းအတွက် မှတ်သားရမယ့် အချက်တချက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ လူအိုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ခံစစ်ကြောင်းက ဘယ်လ်ဂျီယမ်ကို ဒုက္ခပေးသွားခဲ့တယ်လို့သာ ဆိုရမှာပါ။
လိုရန်ဇို အင်ဆစ်ဂ်ညေးရဲ့ လှပတဲ့တေးသွား
အီတလီရဲ့ ဒုတိယဦး​ဆောင်ဂိုးကို ပထမပိုင်းမှာတင် သွင်းယူပြီး ဘယ်လ်ဂျီယမ်ကို ပွဲသိမ်းပေးခဲ့တဲ့ အင်ဆစ်ဂ်ညေးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အသင်းအတွက် အဆင့်အတန်းမြင့်ခြေစွမ်းမျိုးကိုလည်း ပြသခဲ့သလို နာပိုလီအသင်းခေါင်းဆောင်ဟာ သိပ်မကြီးမားလွန်းတဲ့ သူ့ပုံရိပ်နဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီး တည်ငြိမ်စွာနဲ့ အီတလီကို ထမ်းတင်သွားခဲ့တာပါ။ အသက် ၃၀ နှစ်သားဟာ ယူရို ၂၀၂၀ မှာ သူ့နာမည်တလုံးကို ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
လီယိုနာဒို စပီနက်ဇိုလာရဲ့ ကြေကွဲခန်း ဘယ်လောက်ထိကြာမလဲ
ရိုးမားကစားသမားဟာ ခြေဖနောင့်ကြောကို ကြွက်သားပိုင်းဒဏ်ရာအဖြစ် အကြီးအကျယ်ထိခိုက်မိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အချိန်အတော်ကြာ အနားယူရတော့မယ်လို့ သတင်းတွေ​က တက်လာနေပါတယ်။ ကစားသမားအတွက်ရော အီတလီအတွက်ပါ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ သတင်းတခုဖြစ်ခဲ့ပြီး မျက်ရည်တွေကျလို့ ငိုကြွေးရတဲ့အထိ နာကျင်ခံစားရတဲ့အတိုင်း ကွင်းထဲက ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့ အီတလီသားဟာ ၁ နှစ်အထိ အနားယူရမယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
ရော်နယ်လ်ဒိုကို လိုက်မမီတော့တဲ့ လူကာကူ
ဘယ်လ်ဂျီယမ်တိုက်စစ်မှူး လူကာကူက ယူရို ၂၀၂၀ ရဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံး ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှူးကြီး ရော်နယ်လ်ဒိုကို အမီလိုက်ဖို့ အားကောင်းမောင်းသန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် ခွာလိပ်ခဲ့ရပြီး ၄ ဂိုးနဲ့သာ ရပ်တန့်ခဲ့ရပြီး ပြိုင်ပွဲရဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆုကို ရယူသွားဖို့ တစ်ပြေးနေတဲ့ အသက် ၃၆ နှစ်သားရဲ့ ၅ ဂိုးမှတ်တမ်းကို မကျော်ဖြတ်နိုင်တော့တာကလည်း သူ့ကို ရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ တတန်းတည်းသတ်မှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ မာန်မာနကိုလည်း ထိခိုက်သွားစေခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။